हामी स्वादको चक्करमा स्वास्थ्यलाई पार्दैछाै बर्बाद, जंक फूडले यसरी पार्दैछ शरीर सखाब - ज्ञानविज्ञान
यस्तो दिन हुँदैन, जुन दिन उनीहरुले यस्ता खानेकुरा नखाएका होस् । हरेक दिनजसो केही न केही यस्ता खानेकुरा खाइरेका हुन्छन्, जसले जिब्रो लोभ्याउँछ । पेट भरिन्छ । तर, स्वास्थ्यलाई हानी गर्छ ।
बजारमा उपलब्ध खानेकुरालाई स्वादिलो र टिकाउयुक्त बनाउनका लागि कतिपय अखाद्य पदार्थ मिश्रण गरिएको हुन्छ । त्यही तत्व हाम्रो पेटमा नपच्ने मात्र होइन, विषाक्त पनि हुन्छ । पछिल्लो पुस्तामा बढ्दो क्यान्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदिको मूल कारण नै उनीहरुको खानपान बनिरहेको छ ।
हामीले केहि सम्बन्धित जानकारी दिइएका छाै
यदि खानेकुरामा ध्यान नदिने हो भने आउँ पर्नेसम्मको समस्या उत्पन्न हुन्छ । ‘अहिलेसम्मको रिपार्ट हेर्दा जाडोबाट गर्मी सुरु हुने समयमा झाडापखालाका बिरामी बढी आएको पाएका छाैँ ।’ उनले भने ‘त्यसका साथै आउँको समस्या पनि देखिएको छ ।
Don't Miss it धेरै समय दूध उमाल्ने बानि छ ? यस्ता साइड इफेक्ट हुनसक्छन्
Up Next खानेकुरा पकाएर राख्ने गर्नुहुन्छ ? यसरी बन्नसक्छ विषाक्त पकाएर राखेकाे खानेकुरा